Ehelada shaqaalaha saaran markabka afduubka loo haysto oo fariin diray | Baydhabo Online
Ehelada shaqaalaha saaran markabka afduubka loo haysto oo fariin diray
Qoysaska Shaqaale u dhashay waddanka Sri Lank oo lagu haysto Biyaha Somaliya ayaa codsaday in la sii daayo shaqaalaha iyo markabka ay haystaan koox Somali ah oo sheegay in aysan Burcad Badeed ahayn ee ay yihiin kalluumeysato lagu qasbay afduubka Markabkan.
Qoysaska reer Sri Lank,ayaa sheegay in ay codsi u dirayaan ragga Somalida ah ee Biyaha Somaliya ku heysta Markabka wada Shidaalka ee ku xiran agagaarka Degmada Caluula ee Gobolka Bari.
Namali Makalandawa oo ah Gabar la dhalatay Ninka ugu sarreeya shaqaalaha saaran markabka oo lagu magacaabo Premnath Ruwan Sampath,ayaa waxa ay sheegtay in ay Qoysaska la xiriireen Shirkadda uu u raran yahay markabka kuwaas oo ay xaruntooda tahay Dubai,kana jawaabi waayeen Taleefannadii ay u direen.
Waxaa ay tiri “Cabsida ayaa nagu sii kordheysaa,kuna baaheysa quluubteenna,ma heyno xiriirka Kooxda heysata iyo shaqaalaha midkoodna,wax badan kalama socono xaaladdooda ,waxaan u baaqeynaa nolosha kuwa aan jecelnahay.”
Ehelada dadka saaran markabka lagu hayo Caluula ayaa waxa ay shalay la kulmeen Wasiirka arimaha dibadda ee dalka ay ka soo jeedaan ee Sri Lanka ,waxaana ay ka codsadeen in ay ka shaqeeyaan sidii loo badbaadin lahaa nolosha la heystayaasha u dhashay dalkaas.
Saraakiisha Midowga Yurub ee biyaha Somaliya ayaa xaqiijiyay in ay la xiriireen kooxda haysata Markabka,waxaana ay u sheegeen in ay ku hayaan 13 shaqaale ah Markabkana uu ka babanayo Calanka Dalka Comoros.